Blogs & Maruva: Mbeu, Sora, Nyuchi uye Kukura | Martech Zone
Blogs & Maruva: Mbeu, Sora, Nyuchi uye Kukura
China, August 31, 2006 NeChishanu, Gunyana 1, 2006 Douglas Karr
Mumwe wevatungamiriri vechikwata kubasa akataura neni nezve bhuku raakaverenga iro rakapa humbowo hwekuti mashoma mazano aripo chaizvo. Nezuro manheru ndakanyora yekupinda pa Ini Sarudza Indy! kurega vanhu vazive zvaive zvirongwa zvangu zvesaiti. Sezvo vateereri vaive vasiri-techy, ini ndaida kuisa meseji iyi mudimikira yaizopa mufananidzo wakajeka. Sezvo Indiana ichizivikanwa nezvekurima, ini ndakasarudza Mbeu, Sora, Nyuchi uye Kukura.
Iyo pfungwa yakauya kwandiri apo ini ndaive ndakatarisa Webhu 2.0 nzvimbo pane imwe saiti. Ini ndinokumbira ruregerero nekusarangarira kuti ndiyani mukuru akazvitaura, asi akataura 'mbeu & sora' yekuvaka mabhizinesi matsva pamambure. Ndakaitora nhanho yekuwedzera mukutaura nezvekuti ndaizokura sei Ini Sarudza Indy!
Blogs & Blossoms: Varimi vemizambiringa vave vachishandisa nzira idzi kwemazana emakore. Isu tinongova rudzi rutsva.
Unogona kuverenga yangu kupinda pamusoro pesaiti iyoyo, asi inoshanda kune chero blog chaiyo:
Mbeu: Iwe unofanirwa kupa zvinobatsira zvemukati kune vako vaverengi. Izvi zvinodyara mbeu kwavari kudzoka, pamwe nevaverengi vatsva vanokuwana.
Weed: Iwe unofanirwa kunyatso gadzira zvese izwi rako uye dhizaini yako. Kunze kweimwe-yeimwe mbiru pane zvinosetsa, vhidhiyo yaColbert, kana mhuri yako yezororo… iwe unofanirwa kupa vaverengi vako ruzivo rwavave kutarisira kubva kwauri.
Pollinate: Izwi rako rinofanira kutakura kupfuura yako blog. Blogger vanochengeta ziso ravo paindasitiri yavo, pane mamwe mablog, pane nhau… uye vanozviita. Kuwedzera makomendi uye kutaura maonero ako ezvimwe zvinyoreso uchishandisa trackbacks inoshatisa webhu nembeu yako. Zvakare, teerera kune avo vanokanda mhodzi munzira yako ... zvakakosha kuti iwe uvabvume. Kubloga ndiko kutaurirana = nzira mbiri.
Kukura: Mbeu yako (kuverenga) ichakura sezvaunoramba uchidyara, sora, uye kuita munguva. Kukura chikamu chebasa rako futi. Kura hunyanzvi hwako uye kukura network yako. Ramba uine ziso pamabloggi ako ekukura uchishandisa zvakanaka analytical maturusi kuti uve nechokwadi chekuti uri kuenda munzira kwayo.
Ikoko iwe unazvo! Blogs & Maruva. Nzira dzakatumirwa nevarimi kwemazana emakore hadzina kusiyana pane nzira dzaunoda kuvaka blog yakabudirira. Isu tinongova rudzi rutsva rwevarimi. Chirimwa chedu ndechekuverenga, fetiraiza yedu ruzivo, mbeu dzedu zvinyowani, purazi redu iblog redu, masora edu kukwikwidza, kutarisisa kwakashata uye dhizaini yakaipa, uye matekinoroji edu maitiro, mapikicha, kutsvaga kweinjini yekutsvaga uye kugadzirisa pasocial network.
Tevedzera iyo yakapusa mitemo yekurima uye yako blog ichatumbuka!
Starbucks Coupon Kubiridzira: Wadii barcode?
Iyo Yakareba Muswe: Yakasekesa katuni kubva gapingvoid.com